Ihe akpukpo nchara nchara
Usoro nhazi nke waya ga-efunahụ ọkpụrụkpụ nke efere igwe anaghị edozi ruo n'ókè ụfọdụ, n'ozuzu 0.1 ~ 0.2mm. Na mgbakwunye, ebe ọ bụ na ahụ mmadụ, ọkachasị nkwụ, nwere ihe nzuzo siri ike nke mmanụ na ọsụsọ, bọọdụ nchara igwe anaghị agba nchara ga-ahapụkarị mkpịsị aka doro anya mgbe aka metụrụ ya, ọ dịkwa mkpa ka a na-ehicha ya mgbe niile.
Igwe anaghị agba nchara waya ịbịaru n'ozuzu nwere ọtụtụ mmetụta: ogologo waya ụkpụrụ, snow ụkpụrụ, naịlọn ụkpụrụ. Threadkpụrụ kwụ ọtọ kwụ ọtọ bụ usoro agbachitere agbago site na elu rue na ala, yana n'ozuzu ya iji igwe esere eserese megharia ihe eji arụ ọrụ ihu na ihu. Kpụrụ snow bụ ihe kachasị ewu ewu ugbu a. Ejiri obere ntụpọ dị n'usoro, enwere ike iji ya na sandpaper ahụhụ iji nweta mmetụta ahụ.
Thekpụrụ nylon nwere akara nke ogologo dị iche iche. N'ihi na ụkwụ nịịl dị nro n'ụdị, ọ nwere ike igweri akụkụ na-adịghị mma iji ruo ụkpụrụ naịlọn.
Waya ịbịaru mbadamba n'ozuzu na-ezo aka na udidi elu tinyere aha mkpokọta. Aha mbụ bụ frosted board, na ọdịdị ihu na-agụnye ahịrị ndị kwụ ọtọ, usoro ndị na-enweghị usoro (na ahịrị), ripple na eri. Acha igwe anaghị agba nchara waya ịbịaru osisi bụ n'elu nke agba dị iche iche nwetara site na mmiri ọgwụ plating ma ọ bụ agụụ ion plating agba agba nhazi na mkpụrụ elu nke igwe anaghị agba nchara waya ịbịaru osisi.
1. Oghere nke ihe niile kwesịrị ịbụ ihe ziri ezi, na ịghagharị nke akụrụngwa ogologo bụ 1mm.
2. A ghaghị enyocha ihe ndị ahụ maka ịhazi tupu ị belata, ma ọ bụghị ya, ha ga-edozi.
3. N'oge ịgbado ọkụ, electrode ma ọ bụ waya kwesịrị ịbụ ụdị kwesịrị ekwesị maka ihe a na-agbanye ọkụ, a ga-enyekwa akwụkwọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
4. A ga-etinye akụrụngwa ahụ n'ọnọdụ ziri ezi n'oge ịgbado ọkụ.
5. N'oge ịgbado ọkụ, nkwonkwo solder n'etiti ihe ndị ahụ kwesịrị ịkwụsi ike, mgbatị ahụ kwesịrị ijupụta, na ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ n'elu akwa ahụ kwesịrị ịdị n'otu, ma ekwesịghị inwe okpuru ala, welds na-ezughị ezu, mgbawa, slag, weld bumps, burn-through, arc scratches, ntụpọ dị ka aak craters na agịga-dị ka pores, na a ga-enweghị spatter na ịgbado ọkụ ebe.
6. Mgbe ịgbado ọkụ ahụ mechara, a ga-akụtu slag ahụ.
7. Mgbe emechara ngwongwo ndị ahụ ma gbakọọ, ha kwesịrị ịmịchaa ma kpochaa ya na igwe eji aka iji mee ka ọdịdị ahụ dị mma ma dị ọcha.